भियग्रा प्रयोगले कति समय सम्म यौन क्षमता बढाउँछन् ? थाहा पाईराख्नुस - Valley Khabar
Homeमनोरन्जनभियग्रा प्रयोगले कति समय सम्म यौन क्षमता बढाउँछन् ? थाहा पाईराख्नुस
August 4, 2019 dhan kush मनोरन्जन
कमजोर यौन क्षमता भएका अधिकांश मानिसहरू भियग्राको प्रयोग गरी यौन क्षमता बढाउँछन् । यसको प्रयोगपछि केही समय त शरीरका लागि ठीकै होला तर, साइड इफेक्ट पनि प्रशस्तै देखाउँछ । भियग्राको जथाभावी प्रयोगले कहिले कहि ठूलो समस्या पनि ल्याइदिन सक्छ ।
जानी राखौं भियग्रा बारे १५ तथ्यः—
-भियग्रा एक औषधि नै हो । यसले रक्तचाप अस्वभाविक रुपमा केही समयका लागि बढाईदिन्छ ।
-यो हल्का निलो रङ्ग र हिराकारको हुन्छ ।
-यसको ब्राण्ड नाम सिडेनाफिल सिट्रेट हो ।
-यसलाई पुरुषको यौनक्षमतासँग पनि जोड्ने गरिन्छ । यौनक्षमता कम भएका पुरुषहरुले यो प्रयोग गर्ने गर्छन् । -भियग्रा खाएपछि पुरुषको लिङ्गमा अस्थायी रुपमा रक्त प्रवाह बढ्छ ।
-यसलाई पुरुषको यौनक्षमता अस्थायी रुपमा सक्रिय बनाउने औषधिका रुपमा लिने गरिन्छ ।
-भियग्रा बारे सन् १९९८ मा पहिलो पटक इन्टरनेटमा सूचना अपलोड भएको थियो ।
-मानिसहरू यसको प्रयोग क्लब ड्रग, एक्स्टसी, कोकीन, तथा स्पीडका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन् ।
-भियग्रा एक गोली खाएपछि यसको असर आधा घण्टादेखी एकघण्टासम्म रहन्छ ।
-चिकित्सकको सल्लाहविना यो औषधि एक पटकमा एउटा भन्दा बढी खानुहुदैन ।
-यसको सेवन केवल पुरुषले मात्रै गर्नु पर्छ ।
-कसै कसैलाई यसको सेवनपछि साइड इफेक्ट तत्काल देखिन थाल्छ । जस्तैं : टाउको दुख्ने, छाला रातो हुने, पेटमा गडबडी हुने, मांशपेशीहरू दुख्ने आदि ।
-मुटुको समस्या भएकाहरूले भियग्राको गोली बिर्सेर पनि खानुहुदैन । उनीहरूले यो औषधि खाए मुटुको रक्तचापमा वृद्धि भई हृदयघात समेत हुनसक्छ ।
-अर्को कुनै औषधि सेवन गरिहेकाले भुलेर पनि भियग्रा खानु हुँदैन ।
-ब्लड प्रेसरको औषधि लिइरहेकाहरूले पनि प्रेसरको औषधि र भियग्रा खाएमा परिणाम खतरनाक हुन सक्छ । यसकारण एउटा औषधि खान बन्द गरेर मात्र अर्को औषधि खान सुरु गर्नुपर्छ ।
-यदि तपाई अनलाइनको माध्यमबाट भियग्रा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने, ख्याल गर्नुहोस् : तपाइले डाक्टरले सिफारिस पर्ची अनिवार्य देखाउनुपर्छ । कतिपय देशमा भियग्रा खरिदबिक्री गैरकानुनी काम हो ।
यदि तपाई कमजोर यौन क्षमताको हुनुहुन्छ तथा शीघ्रपतनको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्नुअघि चिकित्सकको सम्पर्कमा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । किनभने, कतिपय अवस्थामा मानोवैज्ञानिक प्रभावले पनि यौनक्षमता कम भइरहेको हुनसक्छ ।
सेक्स पावर बढाउने भियग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले कुनै हानीहुन्छ कि हुँदैन ? जानीराखौ
र, कहिलेकाहीँ कसैसँग संसर्ग गरेको सपनाले निद्रामा नै स्खलन पनि हुन्छ । यौनांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । पुरुष यौनांग बेलुनजस्तै हो । बेलुनमा हावाको चाप राखेपछि ठूलो हुँदै आएजस्तै पुरुष यौनांगमा पनि रक्तप्रवाहको चाप ९प्रेसर० बढ्यो भने यौनांगमा रहेका सिगार आकारका बनावटमा अल्पकालीन रूपमा रक्तप्रवाह थुनिन गई यौनांग कडा र लामो हुन्छ ।
किन केटाहरु सानो टाईट योनि र केटिहरु ठुलो लामो लिङ्ग मन पराउछन ? जानीराखौ
पातलो शरीर छिनेको कम्मर भएकी युुवतीले जो कोहि युवालाई पनि सजिलै आकर्षित गर्न सक्दछिन् । सामान्यतया मोटो शरीर भन्दा सरलक्क ज्यानमा भएकी युवती नै युवाहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको विभिन्नअध्ययन अनुसन्धानहरुले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । “इभोलुुसनरी फिटनेस” नामक एक उपन्यासमा पुरुषहरुले जिवनसाथी रोज्दा किन पातलो शरीरमा बढि ध्यान दिन्छन् भनि लेखिएको पनि छ ।
पातली युवती बढि राम्री र स्वस्थ हुने पूर्वधारणा बनाएका हुन्छन् र केहि हदसम्म यो साँचो पनि हो । विभिन्न देशहरुमा हुने आकर्षक युवती प्रतियोगितमा युवतीको पातलो शरीरलाइ पहिलो प्राथमिकता दिएर मुल्याङन गर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हेर्ने हो भने युवतीहरुको शरीर इन्डेक्स १९ हुँदा असाध्यै आकर्षक हुने रेट गरिएको छ ।
आदर्श र मोडल हुनको लागि भने बडी माक्स इन्डेक्स २४ देखि २४.८ हुनुपर्ने बताइएको छ । मसिनो शरीरले वास्तविक भन्दा कम उमेर देखाउने भएकाले पनि यस्ता केटीहरु पुरुषहरुलाइ साह्रै मन पर्छन् । इन्स्टिच्युट अफ जेनेटिक्स एण्ड डेभलमेन्टल बायोलोजीका अगुवा अनुसन्धानकर्ता जोन स्पिकमेनका अनुसार २० वर्ष उमेर पुगेका केटीहरुमा १७ देखि २० बडी माक्स इन्डेक्स मेन्टेन गर्ने हो भने उनिहरुलाइ प्रजनन सम्बन्धी रोग लाग्ने कम सम्भावना हुन्छ ।
युरोपियन, अफ्रिकन र एसियन राष्ट्रका युवतीहरुमा परिक्षण गरि हेर्दा यो सत्य साबित भएको छ । मोटी केटीहरु कम आकर्षित देखिनुका साथै पुरुषहरुको तुलनामा उनीहरुमा मधुमेह, हृदयधात तथा प्रजनन सम्बन्धी रोगहरु लाग्ने खतरा हुने स्पिकम्यान बताउँछन् । आर्कषक देखिने लोभमा अत्ति पातलो शरीर बनाउनुभने प्राणघातक हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अन्डरवेयर नलाई राति किन सुत्ने ? यस्तो रहेछ कारण
एजेन्सी : १ फेब्रुअरीमा अल्डरसटस्थित रिजनल कमाण्ड हेडक्वार्टरमा औपचारिक घोषणापछि खाम्चालाई अहिले बधाइ ग्रहण गर्दैमा भ्याइ नभ्याइ छ । ‘भाग्य, खुबी, मिहिनेत र कामप्रति इमान्दार नै मेरो सफलताको कारण होला’, खाम्चाले आइतबार भने, ‘म एकदम खुसी छु ।
यो प्रमोसन असम्भव त थिएन तर सिपाहीदेखि भर्ती भएर यहाँसम्म आइपुगिएला भन्ने सोचेकै थिइनँ।’ उनको पदावधि अब करिब ५ वर्ष हुनेछ। ‘रिटायर्ड हुँदा नेपाल र नेपालीको इज्जत राखेर फर्कन्छु’, उनले सुनाए।ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ती सुरुआतको झण्डै २०२ वर्ष अवधिमा खाम्चा उच्च तहमा पुग्ने चौंथो नेपाली हुन्। यसअघि उक्त पदमा लालबहादुर पुन, विजय रावत र यामबहादुर राना पुगे पनि उनीहरु अहिले रिटायर्ड भइसके।
स्याङ्जा शिरकोट करादीमा जन्मिएका उनले प्राथमिक तह गाउँमै पढे। बुटवलबाट एसएलसी। उनका बावु पनि दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका योद्धा थिए। तर, बावु आर्मीमा लागे ‘घर न घाट’को भइन्छ भन्ने ठान्थे ।
छोरालाई कानुन पढाउने बावुको इच्छाविपरीत खाम्चा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस भर्ना भए। कलेजका साथीहरु भर्ती हुन जाने हल्ला सुनेपछि उनी पनि पछि पछि लागे। ‘म शारीरीक रुपमा त्यस्तो दरिलो पनि थिइनँ तर भाग्य र साथीको संगतले आर्मीमा भर्ती गरायो’, उनी विगत सम्झन्छन्।सन् १९८७ जनवरीमा आर्मी भर्ती भए उनी ।
खाम्चाको पल्टन क्विन्स् गोर्खा सिग्नल भए पनि अहिले बाहिर बसेर काम गरिरहेका छन् । सेवाका दौरान खाडी युद्धमा साउदी अरब पुगे । कोसोभो, टर्की, इराक, अफगानिस्तानलगायत कयौं देश खटिए । अमेरिकाले सन् २००३ मा इराक हान्दा खाम्चा अमेरिकी र ब्रिटिस सेनासँग मिलेर कतारमा योजना बनाइरहेका थिए ।
सन् २०१६ मे देखि डिसेम्बरसम्म ८ महिना उनले बग्दाद र कुवेतमा काम गरे । आतंककारी संगठन आइएसले इराकको बग्दाद कब्जा गर्न प्रयत्न गरिरहँदा अमेरिकी, ब्रिटिससहितको संयुक्त सुरक्षा फौजअन्तर्गत चिफ अफ स्टाफ भएर कमाण्डरको तर्फबाट हेडक्वार्टर सञ्चालन गर्ने जिम्मा उनलाई थियो ।
कमाण्डरलाई सल्लाह सुझाव दिने र प्राथमिकता के हो भनिदिने गर्थे उनी।सन् २०१२ फेब्रुअरीमा अफगानिस्तान गएर जुलाईमा फर्किए उनी । अफगानिस्तान र इराकको अवस्था फरक थियो । इराकमा अमेरिकी सेनाले नेतृत्व गरिरहेको थियो ब्रिटिस सेनाको सपोर्टिङ रोल मात्र ।
तर, अफगानिस्तानमा लडाइँ हुँदा ब्रिटिस सेना अग्रपङ्तिमा । त्यतिखेर खाम्चाले योजनासहित सञ्चार उपकरणहरु किनेर ब्रिटिस सेनालाई पठाउने काम गरे। चार महिना जति त उनी आफूले पठाएको सञ्चार सामाग्रीको प्रभावकारिता बुझ्न फिल्डमै पुगे ।
विश्वमै कहलिएको बेलायतस्थित सैनिक शिक्षालय रोयल मिलिट्री अकाडमी स्याण्डहर्सटमा कमाण्डिङ अफिसर पछिको भूमिका समेत उनले निर्वाह गरे।बेलायतको नेपाली समुदायसँग निकट रहे पनि जातीय, धार्मिक र राजनीतिक मुद्दाबाट टाढा नै बस्न रुचाउने उनले बताए । नेपाल आउजाउ गरिरहन्छन् उनी । सोमबारबाट जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनले कामका सिलसिलामा नेपाल नै जान सकिने संकेत पनि गरे ।
…र परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छु ! पुरुषले मात्र पढ्नु होला
सुरविना कार्कीको सेक्सी सेल्फी भाइरल बन्दै, कारण यस्तो
काठमाडौँ । अहिले नेपाली फिल्मका कलाकार फेसबुकमा भन्दा बढी इन्स्टाग्राममा बढी सक्रिय छन् । इन्स्ट्राग्राम नेपाली मिडियाकर्मी र फिल्मीकर्मीले निकै कम चलाउने भएकाले पनि धेरै अभिनेता र अभिनेत्री यसमा सक्रिय छन् । आफ्ना निकै गोप्य तस्बिर समेत उनीहरु इन्स्टाग्राममा शेयर गरिरहेका छन् ।
अभिनेत्री सुरविना कार्कीले आफ्नो गोप्य अंग आधा भन्दा बढी देखिनेगरि लिइएको सेल्फीको तस्बिर इन्स्टामा शेयर गरेकी छिन् । फिल्म क्षेत्रमा नचलेकी सुरविना हिजोआज के गर्दैछिन् भन्ने कमै मात्र फिल्मीकर्मी र मिडियार्कीलाई थाहा छ । तर, उनी सामाजिक संजालमा भने हट फोटो अपलोड गर्न माहिर छिन् । फिल्ममा नचलेपनि सामाजिक संजालमा चर्चा कमाउन भन्ने सोच उनमा पलाएको हुनसक्छ ।
बजारमा धमाका पिट्दै ‘अदुवा कण्डम’, यस्तो छ बिशेषता
कण्डम उत्पादक कम्पनीहरुले मार्केटिङका लागि केही न केही प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । कहिले नयाँ नयाँ प्रकारका माध्यमबाट त कहिले अनौठो फ्लेवरबाट ।
चकलेट, बटर स्कच, स्ट्रबेरी जस्ता फ्लेवरको कण्डमले यसअघि नै बजारमा धमाका पिटिसकेका छन् । कण्डम उत्पादक कम्पनी मेनफोर्सले हालै एक अनौठो वासना भएको कण्डम सार्वजनिक गरेको छ । सायद दुनियामा पहिलोपटक कम्पनीले अदुवाको बासना आउने कण्डम लञ्च गरेको हो ।
कम्पनीले यो कण्डमको बाहिरी खोलको लुक्स पनि आफ्नो ट्विटर पेजमा सार्वजनिक गरेको छ । अदुवा कण्डमको घोषणासँगै ट्विटेहरु जुर्मुराएका छन् । ट्विटरमा यस विषयमा अनेक प्रकारका प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भईरहेका छन् ।
एकजना प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, ‘म्यानफोर्स प्रयोग गरौँ, खोकी भगाऔँ ।’ एकजना प्रयोगकर्ताले चाहीँ के यो अदुवा कण्डमलाई चियामा हालेर खान सकिन्छ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । स्मरण रहोस् यो कम्पनीले अचार फ्लेवरको कण्डम ल्याएको थियो ।
श्रीमानले सुनिताको मुखमा पिसाब गरेपछि…. पूरा पढ्नुहोला जिन्दगी यहि हो त?
एजेन्सी : छोरी तिमी सधैं माइती बसेर हुँदैन पराई घर जानुपर्छ ।’ म १० वर्षकै हुँदा बुबाले यसो भनेर बिहेका लागि यसरी फकाउनुभएको थियो । बुबाको कुराले चित्त दुखेर धेरै रोएकी थिएँ । धेरै पढेर राम्रो जागिर खाने रहर १२ वर्षमै बिहे भएर ‘पराई घर’ गएपछि तुहिएर गयो । ‘मारे पाप पाले पुण्य’ भनेर अग्निका अगाडि कसम खाएको लोग्नेले बिहेको एक वर्षदेखि रक्सी खाएर पिट्न थाल्यो ।
उ सरकारी कर्मचारी थियो । अफिस काठमाण्डुमा । हामी भैंसेपाटी बस्थ्यौं । हाम्रा दुई बच्चा भए । बच्चा जन्मिएपछि पनि लोग्नेको कुटाई नखाएको रात हुन्थेन । मलाई मात्र होइन, ती अवोध बच्चाहरुलाई समेत उसले खान दिँदैनथ्यो । एकदिन म बाहिर गएको मौका छोपेर उसले डेरामा ताल्चा ठोकेर हिँडेछ । काखमा ५ महिनाकी छोरी र २ वर्षे छोरा लिएर कामका लागि काठमाण्डुको हरेक गल्ली चहारे । स्वार्थी सहरमा कसैले दया देखाएन ।
माइती जाउँ झनै सम्भव थिएन । किनकी हाम्रो समाजमा ‘अर्काको घर गएकी छोरी’ का लागि माइतीको ढोका सधैंका लागि खुला हुन सक्ने थिएन । बिहे गरेर गएपछि माइती जानु पाहुना लाग्न जानुजस्तै हो । यो सोचेर काठमाण्डुमै संघर्ष गर्ने र छोराछोरी हुर्काउने निधो गरें । आमाको कमजोरी, नियती, बाध्यता वा धर्म के हो मलाई थाहा छैन । तर पुरुषले सजिलै बच्चा छाडेर हिंड्न सक्छ र पाउँछ । तर महिलाका लागि त्यस्तो छुट हुँदोरहेनछ ।
उसले छाडे पनि मैले बच्चा छाडेर हिँड्न सकिनँ । छोराछोरीको साँझ–बिहानको पेट भर्न डान्सबारमा काम गर्नपुगें । धादिङकी सानु मगरले डान्सबारमा यो स्तम्भकारसँग पोखेको पीडा हो यो । सानु भन्छिन्, ‘रातदिन रक्स्याहा लोग्नेको पिटाइबाट मेरो करङ भाँचिएको छ, शरीरमा निलडाम अझै छन् ।
सानुका १० र ११ वर्षको छोरी र छोरा छन् । उनीहरुलाई पाल्न डान्सबारमा काम गर्छिन् । सुरुमा पुतलीडकमा रहेको ताजमहल रेष्टुरेन्टमा काम गरेकी उनी अहिले ठमेलको एउडा बारमा डान्स गर्छिन् । यद्यपि उनलाई अहिले राम्रो नाँच्न आउँदैन । ‘तर म नाचीन भने मेरा छोराछोरी भोकै मर्छन्, तिनिहरुका लागि नजाने पनि नाच्नु मेरो बाध्यता हो ।
उनी नाचेरै तीन जना परिवारको गुजारा चलेको बताउँछिन् । ‘अहिले त छोराछोरी अलि ठूला भए । जब साना थिए मैले आमाको दूध खाने समयमा कोठामा थुनेर काममा जान्थें । घर फर्कंदा कहिले बाटाको पानी घोप्टाएर चिसोमा रोइरहेका हुन्थे, कहिले ओछ्यानमै दिसा पिसाब गरी त्यसैमाथि निदाएका हुन्थे’, सानुले ती दिनहरु सम्झिइन् । सानुले सरकारले सिलाइकटाई र ब्युटीसिएनको तालिम दिन्छ रे भन्ने सुनेकी छन् । ‘त्यसका लागि नागरिकता चाहिने रहेछ । मसँग नारिकता छैन । तालिम लिन पाए पछिलाई गरिखाने बाटो हुन्न्थ्यो’, सानुले आफ्नो पीडा सुनाइन् ।
सानु जस्तै राजधानीमा खुलेका अधिकांश डान्सबारमा कार्यरत धेरै युवती विवाहित छन् । उनीहरुका बालबच्चा छन् । कतिले अविवाहित भनी ढाँटेर काम गर्छन् । कतिले आफ्नो बास्तविकता खुलाएरै त्यस क्षेत्रमा काम गरेका छन् । केही वर्षअघिसम्म युवतीहरु काखे बच्चा च्यापेरै कार्यस्थल जान्थे । बच्चालाई एउटा कोठामा थुन्थे र आफू डान्सबार र क्याबिनमा काम गर्थे ।
त्यसरी काम गर्दा आमा र बच्चामा पर्ने मानसिक असरबारे सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नुवाकोटको विकट गाउँकी सुनिता तामाङ (२८) को व्यथा पनि सानुको भन्दा फरक छैन । वर्षमा तीन महिना पनि खान नपुग्ने परिवारकी सुनितालाई बा आमाले ८ वर्षको उमेरमा ९ वर्षको केटासँग बिहे गरिदिए । बिहे लगत्तै बा आमाको निधन भयो ।
१२ वर्षको उमेरमा श्रीमानको घर छाडेर सुनिता माइत पुगिन । जहाँ दाजुले बस्न दिएनन् । अनि साथीहरुको लहलहैमा काठमाण्डु पसिन् । उनले चाबहिलमा ज्यामी काम गर्न थालिन । भन्छिन्, ‘सानी थिएँ, पैसा थोरै दिन्थे के गर्ने बाँच्नलाई जे पनि गर्नै पर्ने ।’ २ वर्ष काम गरेपछि सँगै काम गर्ने एक युवाले खुबै माया गर्न थाल्यो ।
बिहे गर्ने मन त थिएन, तर ज्यामी काम गरेर पनि जहिल्यै चिउरामा छाक टार्नुपर्ने भएपछि पेट पाल्नकै लागि फेरि बिहे गरिन् । बिहे गरेको एक वर्षपछि छोरा जन्मियो । ‘हामी केटी मान्छे त लोग्नेको कमारा रहेछौं, उनिहरुको इच्छामा नाच्नुपर्ने’, उनी भन्छिन् । सधैं रक्सी खाएर लोग्नेले कुट्दा ऐया भन्ने आँट पनि थिएन उनमा । घोप्टो परेर लात थापिराख्नु कष्टकर दैनिकी उनको थियो । कुटाइको त कुरै भएन ।
यतिसम्मकी श्रीमानले रक्सीको नशामा मुखमै पिसाब गरिदिन थाल्यो । सधैंको पीडा खप्नुभन्दा एक्लै बाँच्छु भन्ने सोचेर छोरा च्यापेर घरबाट हिँडिन सुनिता । एक्लै हुँदा त के खाउँ थियो । छोरा पनि थपिएपछि त कष्ट थपियो । बाध्य भएर साथीको सहयोगमा डान्सबाररमा काम गर्न थालिन् उनी । सानो छोरालाई कोठामा थुनेर सधैं काममा जानुपर्ने ।
छोरा रातभर रुँदै ओछ्यानमै दिसा पिसाब गरेर चिसोमै निदाउँथ्यो । ‘शरीर डान्सबारमा भएर के गर्नु मन डेरामा हुन्थ्यो छोरासँग’, उनी भन्छिन् । छोरालाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउँने सपना उनको छ । ‘आमाले गरेको दुःख सम्झेर उसले मलाई पाल्छ होला नि’, मन बुझाउँने बाटो थियो उनको छोरा । गाउँकी सोझी केटी । डान्सबारमा फिल्मको हिरोइन जसरी नक्कल पारेर ग्राहक खुसी पार्नुपर्ने ।
एक रात काममा गएकाबेला छोराले खाटबाट लडेर खुट्टा भाँचेछ । ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भनेको त्यही होला । काममा नजाऔं, बाँच्ने आधार छैन । जाऔं बिरामी छोराको हेरविचार गर्ने कोही छैन ।
एक वर्षसम्म छोरालाई जोरपाटीको हाडजोर्नी अस्पतालमा छाडेर काममा गइन् उनी । एक वर्षमा पनि भाँचिएको खुट्टा निको भएन । अहिले उसको खुट्टा चल्दैन । वैशाखीको भरमा भित्रबाहिर गर्छ । छोरा पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने धोको पूरा भएन । सुनिता अहिले बहिनी ज्वाईँसँग बस्छिन् । एउटा साँघुरो कोठा छ । त्यसमा एउटा खाट । त्यसमै सबै जना खाँदिएर सुत्छन् ।
डान्सबारको कमाई महिनामा जम्मा ३५ सय । महिनाभरिको कमाइले खानसमेत पुग्दैन । छुट्टै कोठा लिएर बस्नु त परैको कुरा । ‘त्यसैले लाजै पचाएर बहिनीको डेरामा बसेकी छु’, सुनिता भन्छिन् । उमेर छँदासम्म त यो पेशा गरौँला तर उमेर ढल्केपछि के गरेर बाँच्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउँछ । सीपमुलक तालिम नागरिकता खोज्छन् । उनको नागरिका छैन । ‘मेरो त भएन, पछि छोराको कसरी कसरी नागरिकता बन्छ होला ?’ उनलाई चिन्ता छ ।
दमौलीकी मीना ठकुरीका तीन छोराछोरी छन् । बाबुआमाले १६ वर्षको उमेरमा ३५ वर्षको केटासँग बिहे गरिदिए । परिवार पाल्नकै लागि डान्बारमा काम गर्न पुगिन् । जुम्ल्याहा दुई छोरा छोरी र जेठो छोरासमेत गर्दा पाँच जनाको परिवार । श्रीमान केही काम नगर्ने । बाध्य भएर छोराछोरी पढाउन डान्सबारमा काम गर्न पुगिन् उनी पनि । ‘दूध खाने जुम्ल्याहा बच्चालाई कोठामा छाडेर काममा जान्थेँ, लोग्ने कता जान्थ्यो थाहा छैन ।
मनलागे घर आउँथ्यो नत्र बाहिरै रात बिताउँथ्यो । छोराछोरी पाल्ने ठेक्का आमाको मात्र हुनेरहेन । मैले सयौं पुरुषसँग नाटकीय शैलिमा नजिकिनु पर्यो, उनीहरुको ईशारमा नाच्नु पर्यो’, मीना भन्छिन् । मीनाका छोराछोरी ठूला भइसकेका छन् । छोराछोरीले नरमाइलो मान्लान् भन्ठानेर ‘अस्पतालमा रातिको काम गर्छु’ भनेकी छन् ।
थाहा पाए भने ‘छोराछोरीले आमाले डान्सबारबाट कमाएको पैसाले पढ्नुभन्दा नपढी बस्छौ’ भन्छन् कि भन्ने चिन्तामा उनी छिन् । छोराछोरी बुझ्ने भइसकेकाले उनीहरुले थाहा पाउनुभन्दा पहिल्यै सानो पसल खोलेर बस्ने विचार उनको छ । ‘उनीहरुकै राम्रोका लागि डान्सबारमा काम गरे पढाएँ, हुर्काएँ अहिले तिनैले यस्तो काम गरिस् भनेर धिक्कार्छन् कि भन्ने डर छ मलाई’, उनले भनिन् । श्रोत: अमेरिका नेपाल
महिलाहरुको शरीरमा हुने नियमित जैविक प्रक्रिया हो मासिक श्राव । तर यो विषयमा थरिथरिका विचारहरु पाइन्छन् । परम्परागत हिन्दू धार्मिक मान्यताले महिनवारीको समयलाई अछूतका रुपमा व्यवहार गर्दछ । हिन्दूहरुका अनुसार, महिनावारी हुँदा महिलाको शरीरबाट फोहोर रगत निस्किने हुँदा उनी अशुद्ध हुन्छिन् । त्यसैले महिनाबारी हुँदा महिलालाई खाना पकाउन नदिने, पूजाआजामा सहभागी हुन नपाइने, अरुसँग नछोइकन बस्नुपर्ने नियम बनाइएका छन् ।
पोर्न फिल्म सुटिङबारे १० रहस्य, जसले बनाउनेछ तपाईलाई चकित
“गरिबको झुपडीमा सानो खुसी” राम्रोसँग गाई बाख्रा थुन्न नमिल्ने झुपडीमा १७ जनाको परिवार